Pictopia oo ah buug sawir leh oo dhaliil bulsheed iyo siyaasadeed ah | Abuurista khadka tooska ah
Pictopia waa buug lagu sharaxay dhaliil bulsheed iyo siyaasadeed
Pablo Gonder | | Fanaaniin, Dhiirrigelinta
Pictopia a Buug sawir ah oo dhaliil bulsheed iyo siyaasadeed ah kaydiya wadar ahaan 400 sawir iyo 200 oo filim Waqti iyada oo ujeedadu tahay in taas la muujiyo qanacsanaanta bulshada ka hor siyaasada iyo bulshada. Waxay u tahay hage madadaalo ardayda iyo kuwa jecel farshaxanka iyo naqshadeynta doonaya ballaadhi maskaxdaada garaafka ah xoogaa una soo gudbiya kicinta cusub.
Pictopia waxay ina tusaysaa xiiso tixraac muuqaal ahl loogu talagalay abuurista mashaariic farshaxan aan ganacsi ahayn oo lagu abuuray wacdaro xoogga aragtida pSi loo gaaro dad badan, hab lagu abuuro isbeddel fekerka kuwa kale iyada oo loo marayo farshaxan iyo naqshad. Haddii aad tahay farshaxan / naqshadeeye ama aad si fudud u taageerto adduunka garaafka, kama tagi kartid buuggan maxaa yeelay gudaha waxaad ka heli doontaa run yaabab graphic.
Dhaleeceynta waa wax aan waligeen ku soo jirnay si aan u muujin karno nafteena xaalad aynaan u arkin cadaalad: siyaasad, bulsho, shucuur ... iwm, nooc kasta oo mowduucyo ah ayaa loo isticmaali karaa in lagu muujiyo fikradaha mahadsanid taageero muuqaal ah waxay helayaan xoog. Kahor intaanan arkin mashaariicda waxaan arki doonaa oraah yar oo muujineysa fikirka ugu muhiimsan ee buugga.
Waxaan ku nool nahay oo aan ku neefsanaa muuqaalka. Dhaqankeennu asal ahaan wuxuu ku tiirsan yahay aragga, iyo mudnaanta indhaha. Muuqaalkeenna muuqaalka ah, ee aan ka aragno adduunka, wuxuu noqdaa mid si tartiib tartiib ah ugu sii kordhaya farriimo fara badan. Waxay dunida u timid in meelaha qaarkood ay ku badan yihiin macluumaadka muuqaalka ah ee aysan mar dambe suuragal ahayn inaan dhuuxno oo aan wada fasirno dhammaantood.
2 CIQAAB DIL AH
Maalinta caalamiga ah ee Tirtirida Rabshadaha Haweenka ka dhanka ah waxaa soo saaray Golaha Guud ee Qaramada Midoobay sanadkii 1999. Hindisahan la soo jeediyay waxaa sameeyay Dominican Republic iyadoo taageero ka heleysa 60 wadan oo kale si loogu dabaaldego sanad kasta Nofeembar 25. Sababta ku kaliftay dalkan inuu codsado maalintan waxay ahayd dilkii macabre ee walaalaha Patria, Minerva iyo María 25-kii Nofeembar oo uu ku kacay kaligii taliyihii Dominican Rafael Leónidas Trujillo.
Ciqaabta dilka ama dil waa dilid maxbuus ahaan ciqaab dambi ama gef. Hadalku wuxuu ka yimaadaa indo-European caput, "madax", iyada oo loo marayo caasimada Latin. Sidaas darteed, etymologically ahaan, ciqaabta dilka waa ciqaabta lagu soo rogo dambi aad u culus oo u qalma in madaxa laga gooyo. 10-ka Oktoobar ayaa loo xusaa maalinta adduunka si loo wacyi galiyo dadka.
Jaantuskan waxaan ku arki karnaa muhiimadda fikradda Marka ay timaado isgaarsiinta, haddii aan u istaagno ilbiriqsi oo aan falanqeyno, waxaan ogaaneynaa fariimaha suurtagalka ah ee ka dambeeya. Biinanka badbaadadu wuxuu leeyahay laba xaaladood oo suurtagal ah: furan ama xiran, waa shay dib loo rogi karo. Xukunka dilka waa wax aan dib looga noqon karin, haddii ay horey kuu dilaan dib looma laabo. Garaafka, kulankaan waxaa lagu ciyaaraa inta udhaxeysa waxa leh xal celin iyo waxa aan laheyn.
La ujeedada xabsiyada way is badalaysay taariikhda. Waxay ka bilaabantay inay ahaato hab fudud oo lagu sii hayo oo xukunku sugayay, inuu noqdo xukun laftiisa ah. Micnaheedu wuxuu ahaa ujeedka laga leeyahay in bulshada laga ilaaliyo kuwa halista ugu jiri kara iyada oo la isku dayayo in dib loo dhexgalo. Laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa macnaheedu yahay cadaadis siyaasadeed xilliyada adag.
Baararka ayaa noqon kara casaan laakiin aan ilaawin inay kuwani sidoo kale qodax ku leeyihiin jirridooda.
Aqoonsigu waa lin la kala saaro, nooc kasta ha ahaadee, qof kasta, xayawaan ama shay iyo asxaabtooda. Waxay sidoo kale tixraaci kartaa ogaanshaha naftaada. Miyir-qabka waxaa lagu qeexaa guud ahaan aqoonta qofka aadamuhu ku leeyahay naftiisa iyo deegaankiisa. Shakhsi ahaaneed Waa dabeecadda keenta ficil iyo feker madaxbannaan, iyadoo la tixgelinayo dadka kale ama looga soo horjeedo caadooyinka la dejiyey. Isbeddel siinaya mudnaanta xuquuqda shakhsiga marka loo eego kuwa qaab dhismeedka bulshada.
Maxaa dad noo aqoonsada?
Buugani waa fiican yahay haddii aad rabto ku dhiirrigeliya oo ku dhiirrigeliya si loo abuuro garaafyo muhiim ah dhammaan noocyada mawduucyada kaa saara adiga sanduuqyada. Haddii aad fursad u leedahay inaad iibsato, ha ka waaban ilbiriqsi.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Pictopia waa buug lagu sharaxay dhaliil bulsheed iyo siyaasadeed
buug xiise leh sida ku qoran waxaad qortay, sida aan ku heli karno ama halkee, waan ka bogaadinayaa macluumaadka
Jawaab Renzo Díaz Tijero
Ubax weyn oo ubax ah ayaa loo qaadayaa waddooyinka magaalada New York
Mashruuca 25 mashruuc sawir fikradeed